साउदी राजकुमारको बहुमूल्य होटल विनोद चौधरीले किने ! | साउदी राजकुमारको बहुमूल्य होटल विनोद चौधरीले किने ! – हिपमत
साउदी अरबका राजकुमारको लक्जरी होटेल नेपाली व्यवसायी विनोद चौधरीले किनेका छन्। साउदी अरेबियाका राजकुमार अल वालिड विन तलालले उक्त होटेलको स्वामित्व चौधरी ग्रुपलाई झण्डै ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा विक्री गरेका हुन्। केही महीनाअघि साउदीका यी राजकुमारलाई भ्रष्‍टाचार अभियोगमा प’क्राउ गरिएको थियो। आर्थिक सम’स्या भएपछि उनले होटल बेचेका हुन् । भ्रष्टाचारलगायत आरोपमा स्वदेशमा पक्राउ परेको महिनौँपछि साउदी राजकुमारले आफ्नो छरिएर रहेको लगानीलाई पुनः संगठित गरिरहेका छन्। साउदी राजकुमार र चौधरी ग्रुपबीच भएको सम्झौताका जानकार एक सल्लाहकारलाई उधृत गर्दै उक्त अनलाइनले जनाएअनुसार २.८ अर्ब केन्याली मुद्रामा उक्त सम्झौता भएको हो। यो भनेको नेपाली करिब ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हो। साउदी राजकुमार र चौधरी ग्रुपबीच भएको सम्झौताका जानकार एक सल्लाहकारलाई उधृत गर्दै उक्त अनलाइनले जनाएअनुसार २.८ अर्ब केन्याली मुद्रामा उक्त सम्झौता भएको हो।